Emoji ၏ SEO အပေါ်တွင်သက်ရောက်မှု - SERP များတွင်၎င်းတို့ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ထိုက်တန်သလော။ - အဆိုပါ Semalt အဖြေ
ရှာဖွေမှုရလဒ်များရှိစာမျက်နှာများ၏ဖော်ပြချက်များနှင့်စာမျက်နှာခေါင်းစဉ်များမှရုပ်ပုံများကိုသင်တွေ့ဖူးပြီးပြီ။ ၎င်းသည်ပြုံးနေသည့်မျက်နှာ၊ ကားတစ်စီး၊ အာမေpointိတ်အမှတ်၊ မေးခွန်းအမှတ်အသားနှင့်အခြားအရာများဖြစ်နိုင်သည်။ ဤပုံများသည်ရုပ်ပြောင်များဖြစ်သည်။ သူတို့ဘာတွေလုပ်နေလဲ သူတို့ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲ emoji ရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကဘာလဲ SEO ?
သင်၏စိတ်ခံစားမှုကိုဖော်ပြရန်လူမှုကွန်ယက်များ၊ စာသားမက်ဆေ့ခ်ျများသို့မဟုတ်အီးမေးလ်များတွင်သင်အသုံးပြုသောရုပ်ပုံများဖြစ်သည်။ emoji ရဲ့လားအတူတူပဲပြုံးတာလား။ မဟုတ်ပါ၊ သို့သော်၎င်းတို့သည်စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာအခြေအနေများကိုအလေးပေးဖော်ပြရန်နှင့်စကားလုံးများမပါဘဲသတင်းပို့ရန်အသုံးပြုသောကြောင့်၎င်းတို့သည်အလားတူအသုံးပြုမှုများရှိသည်။
Emoticons တွေကိုရိုက်နှိပ်ပြီး Emoji တွေကပုံဖော်တယ်။ သူတို့တစ်ချိန်တည်းမှာဖန်တီးမခံခဲ့ရပါ။ Emoji သည် ၁၉၉၉ ခုနှစ်တွင်ပထမဆုံးအကြိမ်ပြသခြင်းဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာထို့နောက်သူတို့ကိုဂျပန်နိုင်ငံမှ Shigetaka Kurita မှတင်ဆက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ၁၉၈၂ ခုနှစ်တွင်မိုဟာမက်၏နေ့အလင်းကိုမြင်တွေ့ရစဉ်။ ၎င်းတို့အကြားအရေးကြီးသောခြားနားချက်မှာရုပ်ပြောင်သည်စိတ်ခံစားမှုကိုရောင်ပြန်ဟပ်ရုံသာမကရုပ်ပုံများတွင်တိရစ္ဆာန်များပါ ၀ င်နိုင်သည်။ အရာဝတ္ထု, အပင်များနှင့်ပိုပြီး။ ထိုကဲ့သို့သောရုပ်ပုံများအမျိုးအစားအများအပြားရှိပါတယ်။ အောက်တွင်လူကြိုက်အများဆုံး emoji တစ်ခုကိုအောက်တွင်သင်တွေ့နိုင်သည် သူတို့ download လုပ်နိုင်ရှိရာဆိုဒ်များ။
Emoji သည်လျင်မြန်စွာလျှောက်လွှာကိုတွေ့ရှိခဲ့သည် SEO။ ဤရုပ်ပုံများကိုမည်သို့အသုံးပြုနိုင်မည်နည်း။ emoji သည် SEO အပေါ်မည်သည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသနည်း။
emoji သည် SEO အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်သည်
သင့်၏ရုပ်ပုံများကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်သင်သည်စကားလုံးအနည်းငယ်ကိုသာအစားထိုး။ တစ်ချိန်တည်းတွင်စာသား၏အမြင်အာရုံကိုဆွဲဆောင်နိုင်သည်။ ဤဖြေရှင်းချက်သည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကျွမ်းကျင်သူများ၏အာရုံကိုဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့သည် SEO ကျွမ်းကျင်သူ။ သို့သော် emoji ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ကိုဂူဂဲလ်၏ရလာဒ်များအရပိုမိုမြင်သာအောင်ပြုလုပ်နိုင်ပါသလား။ emoji သည် SEO အပေါ်မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်သနည်း။
SEO emoji - SEO မှာ emoji သုံးသင့်သလား။
Pictograms သည် SEO အထူးကုများကြားတွင်လူကြိုက်များလာသည်။ စာသားထဲမှာသူတို့ရှိနေခြင်းစာဖတ်သူတွေရဲ့အာရုံကိုဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ခေါင်းစဉ်သို့မဟုတ် meta ဖော်ပြချက်ရှိ Emoji သည်ပိုမိုမြင့်မားသော CTR သို့ဘာသာပြန်နိုင်သည် (Click Through Rate), သူတို့ကိုအသုံးပြု။ ရကျိုးနပ်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ သို့သော် ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်ဂူးဂဲလ်က Emoji ကိုနောက်တဖန်မထောက်ပံ့တော့ဟုကြေငြာခဲ့သည်။
ကောင်းပြီ, ဝက်ဘ်ဆိုက်ပိုင်ရှင်တွေပြိုင်ဆိုင်မှုကနေထင်ရှားပေါ်ထွန်းဖို့သူတို့ကိုအလွဲသုံးစားမှု။ အချိန်ကုန်လွန်လာသည်နှင့်အမျှရှာဖွေမှုရလဒ်များမှရုပ်ပုံများသည်နောက်ဆုံးပျောက်ကွယ်သွားသည်အထိလျော့နည်းသွားသည်။ သို့သော် Google သည် Emoji နှင့်အမြဲတမ်းကွဲကွဲပြားပြားမရှိကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင်အရောင်များသောအိုင်ကွန်များသည် SERP သို့အလျင်အမြန်ပြန်သွားသည်၊ သို့သော်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်သည်၎င်းတို့ကိုပြသရန်အတွက်စည်းမျဉ်းများကိုပြုပြင်ခဲ့သည်။
၀ က်ဘ်ပေါ်မှရုပ်ပုံများလူကြိုက်များမှုကြောင့်ဖြစ်သည်။ သို့သော်၊ ၎င်းသည်၎င်းတို့ကိုကန့်သတ်ချက်မရှိပဲသုံးနိုင်သည်ဟုမဆိုလိုပါ။ ရှာဖွေမှုရလဒ်များသည်သင်ခေါင်းစဉ်နှင့် Meta ဖော်ပြချက်တွင်ထည့်ထားသည့်ရုပ်ပြောင်အားလုံးကိုပြလိမ့်မည်။ Emoji ကိုတရားမျှတမှသာပြသရန် Google မှခွင့်ပြုထားသည်။ ဒီအလေ့အကျင့်အတွက်ဘာကိုဆိုလိုသလဲ အသုံးပြုသောရုပ်ပုံများကို SERPs တွင်ပြသမည်ကိုသင်သေချာမသိပါ။
emoji အဘို့အဘယ်သို့ပြုနိုင်သည် SEO ? အကြောင်းပြချက်များစွာအတွက်သင်၏မဟာဗျူဟာတွင်သူတို့ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။ သူတို့ရဲ့အသုံးပြုမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ကိုရှာဖွေမှုရလဒ်များတွင်ပိုမိုဆွဲဆောင်နိုင်လိမ့်မည်။
သင်သည် CTR ကိုတိုးမြှင့်လိမ့်မည်။ အကယ်၍ ဤညွှန်ပြချက်သည်မြင့်တက်ပါက၎င်းသည် URL ၏ဆွဲဆောင်မှုရှိကြောင်းဂူးဂဲလ်၏ algorithm ကိုအချက်ပြပြီး၎င်းသည်ရှာဖွေမှုရလဒ်များတွင်၎င်းကိုပိုမိုမြင့်မားသောအနေအထားသို့ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ သင်သည်တူညီသောရာထူးကိုထိန်းသိမ်းထားလျှင်ပင်၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သော CTR သည်သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်သို့ပိုမိုလည်ပတ်ခြင်းကိုဆိုလိုသည်။
Click through Rate သည်မည်သည့်အချိန်၌ကျေနပ်ဖွယ်ကောင်းသနည်း။
ကျွန်ုပ်တို့ကြော်ငြာသည်ထိရောက်မှုရှိသည်ဟုယုံကြည်စိတ်ချစွာထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်သည့်တန်ဖိုးတစ်ခုတည်းနှင့်ရှင်းလင်းသောကန့်သတ်ချက်မရှိပါ။ ၎င်းသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတိုင်းနှင့်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးအမျိုးအစားတိုင်းအတွက်ကွဲပြားသည်။ သင်၏စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးတွင် CTR သည်မည်မျှကျေနပ်အားရကြောင်းသင်ဆုံးဖြတ်လိုပါကအလားတူအခြေအနေများအောက်ရှိရလဒ်များကို အခြေခံ၍ နှိုင်းယှဉ်မှုအဆင့်ကိုဖန်တီးပါ။ နိမ့်သောကလစ်နှိပ်ပါနှုန်းနှုန်းရမှတ်သင့်ကြော်ငြာကိုဖယ်ထုတ်မထားဘူးသတိရပါ။ သင်၏ရမှတ်ကိုမြှင့်တင်ရန်သင်တိုးတက်အောင်လုပ်နိုင်သည့်အချက်အနည်းငယ်ရှိသည်။ များသောအားဖြင့်၎င်းသည်ဖော်ပြချက်သို့မဟုတ်ခေါင်းစဉ်များပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံအနိမ့်ရလဒ်ကြော်ငြာစမ်းသပ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကြော်ငြာအုပ်စုတစ်ခုစီတွင်အလွန်ကောင်းသောလုပ်ဆောင်မှုနှင့်ပျက်ကွက်မှုတစ်ခုရှိလိမ့်မည်။
Google တွင်ရှာဖွေသောအခါသင် emoji ကိုသုံးနိုင်သည်။ I.e. သငျသညျဥပမာ, ရှာဖွေရေးလယ်ပြင်၌သူတို့ကိုထည့်နိုင်သည် သော့ချက်စာလုံးကိုအစားထိုး။
ဥပမာအားဖြင့်၊ ပီဇာသည်ထိုကဲ့သို့သောရုပ်ပြောင်ကိုခေါင်းစဉ်၊ အကြောင်းအရာနှင့်ပတ်သက်သော Meta ဖော်ပြချက်ကိုအသုံးပြုပါက၎င်းသည်ထိုကဲ့သို့သောမေးမြန်းချက်အတွက်ရှာဖွေမှုရလဒ်များတွင်မြင့်မားသောရာထူးများ၌ပေါ်လာလိမ့်မည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ emoji အသုံးပြုမှုကိုရှာဖွေခြင်းသည်လူကြိုက်များသည်မဟုတ်ပါ၊ သို့သော် ၀ က်ဘ်ဆိုက်ပေါ်ရှိရိုးရှင်းသောပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုကြောင့်သင်နောက်ထပ်ထပ်မံလည်ပတ်မှုများပြုလုပ်နိုင်လျှင်ပင်၎င်းသည်ကျိုးနပ်ပါသည်။ နောက်ဆုံးတွင်ဤအသုံးပြုသူများသည်သင်၏ပုံမှန်ဖောက်သည်များဖြစ်လာနိုင်သည်။
ထို့အပြင်သုတေသနပြုချက်အရအပြုသဘောဆောင်သောသင်္ကေတများကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်သင်၏တွေ့ဆုံမေးမြန်းသူ၏စိတ်နှင့်ယုံကြည်မှုကိုတိုးတက်စေနိုင်သည်။ World Emoji Day 2019. တွင် Adobe အသုံးပြုသူ ၁၀၀၀ ၏စစ်တမ်းကောက်ယူမှု၏ရလဒ်ကို Adobe ကမျှဝေခဲ့သည်။ Emoji Trend Report ဖြစ်သည်။ ဖြေဆိုသူတွေကတော့
အီမိုဂျီကိုသုံးသောပြောဆိုသူများသည် ပို၍ ရင်းနှီးဖော်ရွေပြီးချဉ်းကပ်ရလွယ်သူများဖြစ်သည် - ၈၁%;
emoji ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးသူ၏ရင်းနှီးဖော်ရွေမှုကိုတိုးစေသည် - ၈၀%;
Pittogram များအသုံးပြုခြင်းသည်အလုပ်ခွင်၌ယုံကြည်စိတ်ချရမှုအပေါ်အပြုသဘောသက်ရောက်သည် - ၆၃%;
စာသားထဲမှာဖော်ပြဖို့ခက်ခဲတဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေကိုဖော်ပြဖို့သူတို့ဟာ emoji ကိုသုံးတယ် - ၆၅% ။
သငျသညျမွငျနိုငျသကဲ့သို့, emoji SEO ဆိုသည်မှာအဘို့အကောင်းတစ် ဦး အဖြေကိုဖြစ်ကြသည်။ ၎င်းတို့သည် ၀ ဘ်ဆိုဒ်ပေါ်ရှိသတင်းစကားများ၏ပိုမိုထိရောက်မှုအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်ကိစ္စတိုင်းတွင်အလုပ်လုပ်သည်ဟုမဆိုလိုပါ။
သငျသညျ emojis စာမျက်နှာကုဒ်၏ကွဲပြားခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းများတွင်ထားနိုင်ပါတယ်။ သူတို့နှင့်သက်ဆိုင်သည် -
၎င်းကိုအသုံးပြုရန်အတွက်အကောင်းဆုံးနေရာမဟုတ်ပါ။ လိပ်စာကိုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာနဲ့အသုံးပြုရလွယ်ကူလျှင်ပိုကောင်းတယ်။ အရေးအကြီးဆုံးမှာ - ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်သည်ရုပ်ပြောင်ကိုပြလိမ့်မည်ဟုမသေချာပါ။ အကယ်၍ မပြပါက၊ ကြည့်ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူး
၎င်းသည်စာမျက်နှာ၏ <head> အစိတ်အပိုင်းမှ <title> </title> tags များအကြားဖြစ်သည်။ ထို emojis သုံးစွဲဖို့နေရာကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
၎င်းသည် <description> </description> တံဆိပ်များကြားတွင်ရှိသည်။ ဤသည်မှာသင်သည်သူတို့နှင့်အတူရေကြောင်းမသွားဘဲ၊ မက်ဆေ့ခ်ျအားဆွဲဆောင်မှုနည်းအောင်လုပ်နေသရွေ့ emoji ကိုသုံးရန်စာမျက်နှာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဒါကလုံလောက်တဲ့ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ လက်ခံသူကိုအကြောင်းအရာနှင့်စိတ် ၀ င်စားလိမ့်မည်။ ၎င်းအပိုင်းအစများကို SERPs တွင်ပြသနိုင်သည်။
သင်သိသည့်အတိုင်း၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်ဂူးဂဲလ်သည်အလွဲသုံးစားမှုပြုလုပ်ပြီးကတည်းကရှာဖွေမှုရလဒ်များတွင်ရုပ်ပုံများကိုမပြရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ လက်ရှိတွင် emoji ကိုအသုံးပြုနေသော်လည်း၎င်းတို့သည် Google ရလဒ်တွင်ပေါ်မည်ကိုသင်မသေချာပါ။ ၎င်းသည်ရှာဖွေရေးယန္တရားအပေါ်မူတည်သည်။ ရုပ်ပုံများကိုအသုံးပြုသောအခါဤစည်းမျဉ်းများကိုလိုက်နာပါ။
Emoji သည်အကျိုးကျေးဇူးများစွာရနိုင်သော်လည်းပညာရှိစွာသုံးနိုင်သည်။ အချို့သောစာရေးသူများသည် URL နှင့်ခေါင်းစဉ်တွင်များစွာသောရုပ်ပုံများကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ကြည့်ရတာအဆင်ပြေရဲ့လား။ ဒီလိပ်စာမှာဘာတွေ့ရမယ်ဆိုတာတောင်ပြောဖို့တောင်ခက်ပါတယ်။
အမှတ်တံဆိပ်တိုင်းအတွက် Emoji မဟုတ်ပါ
သင်၏ရုပ်ပြောင်ကိုသင်အကောင်အထည်ဖော်ပြီးသည်နှင့်သင်၏ CTR အပေါ်မည်သို့သက်ရောက်သည်ကိုခြေရာခံပါ။ ဒီအတွက် Google Search Console ကိုသုံးပါ။ ဒီအညွှန်းကိန်းမူလဘယ်လောက်နှင့်ပြုပြင်မွမ်းမံပြီးနောက်မည်မျှစစ်ဆေးပါ။ သို့သော်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းတွင်ဖြစ်နိုင်သောအနေအထားပြောင်းလဲမှုများကိုထည့်သွင်းရန်မမေ့ပါနှင့်။
သင် emoji ကိုစမ်းသပ်ချင်သည်ကိုသိနှင့်ပြီ။ ၄ င်းတို့အသုံးပြုရန်အလွန်လွယ်ကူပြီးပရိုဂရမ်ဗဟုသုတမရှိပါ။ ပထမ ဦး စွာသင်၏ပုံသဏ္ogramာန်ပုံရင်းမြစ်ဖြစ်မည့်စာမျက်နှာသို့သွားပါ။ ဤတွင်အိုင်ကွန်ရင်းမြစ်ဥပမာအချို့ကိုဖော်ပြထားသည်။
ရုပ်ပုံတစ်ခုထည့်ရန်ဤဝက်ဘ်ဆိုက်၏ပထမဥပမာ၏အရင်းအမြစ်များကိုသုံးပါ။ ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ကို သုံး၍ သင်စိတ်ဝင်စားသောအိုင်ကွန်ကိုရှာပါ။ ဥပမာ၊ လက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်ပါစေ။ လက်ဆောင်အိုင်ကွန်ကိုရလဒ်စာရင်းတွင်ဖော်ပြလိမ့်မည်။ ၎င်း၏အမည်ပေါ်တွင်နှိပ်ပါ။
ထို့နောက်ဖော်ပြချက်နှင့်၎င်းအောက်ရှိ "Copy" ခလုတ်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ ၎င်းကိုနှိပ်ပါ။ ဦး စွာ၊ ၎င်းကို Google ရှာဖွေမှုရလဒ်များတွင်ရှာဖွေပါ။ ရှာဖွေရန်အကွက်ထဲတွင်နှိပ်ပါ၊ ပြီးနောက် paste ရွေးစရာကိုအသုံးပြုပါ။
စာမျက်နှာတစ်ခုသို့ရုပ်ပြောင်များထည့်ရန်လည်းလွယ်ကူသည်။ တောင်တန်းများရှိဆွဲဆောင်မှုများအကြောင်းဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုတည်းဖြတ်လိုလျှင်၊ ခေါင်းစဉ်ရှိတောင်တန်းများကိုပြသည့်အိုင်ကွန်တစ်ခုကိုထည့်ပေါင်းလိုသည်ဆိုပါစို့။ ၎င်းကိုကူးယူပြီးပါကဆောင်းပါးထုတ်ဝေမှုကိုသွားပါ။ ၎င်းသည် All in One SEO သို့မဟုတ် Yoast SEO plugin ကိုထည့်သွင်းထားသည့် WordPress ၀ ဘ်ဆိုဒ်ဖြစ်ပါကအိုင်ကွန်ကိုဂူးဂဲလ်ကိုရှာဖွေသည့်အခါ၊ ခေါင်းစဉ်နေရာရှိမိတ္တူကူးခြင်းနှင့်ကူးယူခြင်းများကိုအသုံးပြုသည့်နည်းတူကပ်ပါလိမ့်မည်။
အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍ သင်သည်ဤသို့မဟုတ်ထို plug-in ကိုအသုံးချပရိုဂရမ်တစ်ခုတည်းနှင့်မသုံးပါက၎င်းစာမူ၏ခေါင်းစဉ်ရှိရုပ်ပုံအားကပ်ထားရန်လုံလောက်ပြီးရလဒ်ကိုသင်ရရှိလိမ့်မည်။
ရှာဖွေမှုရလဒ်များတွင်ရုပ်ပုံများကိုဖော်ပြရန်အတွက် Google စက်ရုပ်၏လည်ပတ်မှုနှင့်စာမျက်နှာကိုပြန်လည်ညွှန်းကိန်းကိုစောင့်ရမည်။ သို့သော်သင့်တွင် ၁၀၀ ရာနှုန်းမရနိုင်ပါ။ အဆိုပါရုပ်ပြောင်မြင်နိုင်ပါလိမ့်မည်သေချာပါစေ။ ထိုနည်းတူပင်စာမျက်နှာဖော်ပြချက်တွင်အိုင်ကွန်တစ်ခုကိုသင်ထည့်နိုင်သည်။
နိဂုံး: Emoji - အသုံးပြုမှု၊
ဒါ့အပြင် Pixtograms တွေသုံးသင့်တယ်။ သူတို့သည်သင့်ကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည် ပိုမိုမြင့်မားသော CTR လာပြီ နှင့်အသုံးပြုသူပိုမိုဆွဲဆောင်မှုအကြောင်းအရာ။ သို့သော်, ဖြည့်ညှင်းလေ့ကျင့်ရန်သတိရပါ။ အိုင်ကွန်အရေအတွက်နှင့်မလွန်ပါနှင့်။ အကယ်၍ ၎င်းတို့သည်များလွန်းနေပါကအကျိုးသက်ရောက်မှုသည်တန်ပြန်အကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်၊ Google ပင်လျှင်၎င်းတို့အားလုံး ၀ မပြပေ။
သို့သော်သင့်ဆိုဒ်၏ SEO တွင် emoji ကိုသုံးရန်အခက်အခဲရှိပါကရိုးရိုးရှင်းရှင်းပင် Semalt ကိုဆက်သွယ်ပါSEO လုပ်ငန်းကိုအထူးပြုသည့်အေဂျင်စီတစ်ခု။ အမှန်မှာ Semalt သည်သင်၏မူလဘာသာစကားမည်သို့ပင်ရှိစေကာမူတစ်နေ့လျှင် ၂၄ နာရီသင့်အားကူညီရန်အရည်အချင်းပြည့်မီသောကျွမ်းကျင်သူများရှိသည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Semalt ဟာဘာသာစကား ၁၁ မျိုးကျော်နဲ့အလုပ်လုပ်တယ် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသော SEO ကိရိယာများနှင့်အရည်အသွေးမြင့်ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်အတူ။
tools တွေအကြောင်းပြောနေတာ, ငါတို့ကိုးကားနိုင်ပါတယ် Semalt.net သင်၏ကုမ္ပဏီအတွက်အားကောင်းသော SEO ကိရိယာများ။ သင်လုပ်ရန်လိုအပ်သည်မှာသင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုအပြည့်အဝဆန်းစစ်ရန်သင်၏ဒိုမိန်းကိုရိုက်ထည့်ရန်ဖြစ်သည်။
ထို့အပြင်အရည်အသွေးပြည့်ဝသော ၀ န်ဆောင်မှုအကြောင်းပြောရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်အဓိက ၀ န်ဆောင်မှု ၃ ခုရှိသည် - သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်၏လျင်မြန်စွာတိုးတက်မှုအတွက်ဤအကျိုးကျေးဇူးများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရန်သင့်အားအကြံဥာဏ်တောင်းခံရန်ကျွန်ုပ်အားအထူးဖိတ်ကြားသည်။ ဤသည်များမှာ:
FullSEO ဖြေ - သင့်လုပ်ငန်းအတွက်အဆင့်မြင့် SEO နည်းပညာများ
Semalt Web Analytics မှ : Google TOP10 သို့အတိုဆုံးနည်းလမ်းကိုဖော်ပြသည်